Ndezvipi zvakanakira gore-based webhu kubata | ECommerce nhau
Ndezvipi zvakanakira gore-based webhu kubata
Susana Maria Urbano Mateos | | nemitambo
Kunyangwe iri webhusaiti yako kana e-commerce peji, Kubata webhu ndechimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo kana uchitanga Internet webhusaiti chirongwa. Kune akasiyana mhando dzewebhu kubata dzinowanikwa uye pasina kukahadzika kuti gore-rakavakirwa padandemutande rekubatira ndeimwe yedzakanakisa sarudzo.
Zvakanakira gore-based webhu kubata (Cloud Hosting)
Zvakawanda Makambani eEcommerce Ivo vari kuwedzera kusarudza iyi mhando yekugamuchira uye chikonzero ndechekuti inovapa iwo akawanda akawanda mabhenefiti uye mabhenefiti pane echinyakare webhu saiti.
Un Cloud-yakavakirwa pawebhu kubata Izvo zvakanaka kumabhizimusi ari kukura nekuchinja kuri kuita bandwidth kudiwa. Kana zvaunoda zvikawedzera, zviri nyore kuwedzera kugona kwako mugore, ndizvo zvazvinoita kana zvaunoda zvichiderera. Uku kuchinjika kunopa mukana wakakura pamusoro pevanokwikwidza.
Iine cloud-based web hosting, zviri nyore kushandisa data backup uye kugadzirisa mhinduro, zvichienzaniswa nenzira dzakajairika dzekubata. Izvi zvakare zvinoponesa nguva uye zvinodzivirira hombe yekutanga mari.
Otomatiki software inogadziridza
ari webhu vanopa vanopa Mugore ivo vanochengeta maseva uye vanoburitsa yakajairika software inogadziridza, kusanganisira ezvekuchengetedza matsva. Izvi zvinoita kuti zvive zvisina basa kunetseka nezve nyaya dzekuchengetedza, kutarisa pane zvimwe zvinhu zvakakosha, sekukura kwebhizinesi.
Shanda kubva chero kupi
Na Cloud Hosting iwe unogona kushanda kubva chero kupi sezvo iwe uchingoda chete kuve neInternet kubatana. Mazhinji webhu-based hosting services inopa mafoni ekushandisa ayo anowirirana nemidziyo yese.
Pamwe chete nezvose zvataurwa pamusoro apa, gore rinogadzirirwa webhu inomiririra chengetedzo iri nani nekuti data rakachengetwa mugore uye rinogona kuwanikwa zvisinei nezvinoitika kumakomputa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » Ndezvipi zvakanakira gore-based webhu kubata
Maitiro ekushandura anotungamira mukutengesa
4 makiyi ekubudirira neemail kushambadzira